Ukusetyenziswa kweWiCarrier 1.0-1- Izicelo- Cydia [Simahla] -Tshintsha igama lomntu ophethe i-Wifi | IPhone iindaba
I-WiCarrier 1.0-1- Izicelo-i-Cydia [yasimahla] -Tshintsha igama lomntu ophetheyo abe yi-Wifi
I-WiCarrier, sisixhobo esitsha esiguqula igama lomsebenzisi wefowuni kwi-iPhone, ye-Wifi esiyixhumileyo.
Ukuze uyifake, kuya kufuneka ukuba uyenzile Jailbreak kwi-iPhone.
Nje ukuba ifakwe, uMthombo uyenziwa kunye "Igama" okanye "IP" yeWifi esixhuma kuyo.
Ngokucofa kwindawo yokuThutha, igama leWifi liya kutshintshelwa kwi-IP.
Xa isiginali ye-Wi-Fi ilahlekile, igama lefowuni liza kuvela kwakhona.
Ukuba umntu ulitshintshile igama lefowuni walinika elinye igama, umzekelo nge-FakeCarrier, isebenza ngendlela efanayo.
I-WiCarrier sisixhobo simahla, enokukhutshelwa kudidi lwe "Uhlengahlengiso" en Cydia ngokugcina Ubhosi omkulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Jailbreak » Cydia » I-WiCarrier 1.0-1- Izicelo-i-Cydia [yasimahla] -Tshintsha igama lomntu ophetheyo abe yi-Wifi
Kum esi sicelo siluncedo kakhulu. Bendizimisele ukuya kuseto ukuze ndibone ukuba yeyiphi inethiwekhi endidibanise kuyo kunye ne-IP endiyabileyo. Kuyinyani ukuba nge-SBSettings unokwazi ne-IP kunye negama lenethiwekhi, kodwa ke ukhululeke ngakumbi.
Ewe kunokwenzeka, ndingathanda ukwazi igama lesicelo elifakwe kwi-iPhone kwiifoto.
Enkosi ngayo yonke into nangemibuliso
Phinda usebenze sitsho
Kuthekani nge-iPod? Ngaba ithatha indawo apho ubeka khona i-iPod, okanye ayisebenzi? Ngaba kukho umntu owake wayizama?
Isifundo sikhangeleka sihle kakhulu, sibizwa njani?
Ndithetha isicelo apho ungabona khona i-ajenda kunye nezinye izinto ... Enkosi
Ndifuna ukuyazi¡¡¡ kwaye ndiyavuyisana noAna ngam 🙂
Phendula ku RafaNcp
sowundibambile ana? 😉
Ukubanjwa ziimpundu njengoko uyeka ukubeka iindaba malunga nohlaziyo ndingathanda ukuba ube apha ukuze ndikunike eminye imikhosi uCacho CABRON
hahahaha Pedro ndiyaxolisa ngokususa iingcinga zakho kunye namaphupha akho, kodwa ukuba ubundibeke phambi kwakho ngesele uqinisekile ukuba uza kwazi okuninzi ukuze kwimizuzwana emi-2 ungafumani ukukhaba okuphezulu emlonyeni wakho ukuba ubambe i-grogi iiyure ezingama-2.
Kwaye jonga, nangona ndikulo msongo, andinabundlobongela kodwa uThixo uyazi ukuba ndingathanda ukuba umnqweno wakho usibone sizalisekiswa
Inyani yile yokuba umxholo upholile, ngokujonga nje ubona yonke into, ikhalenda ipholile. Ukuba kukho umntu owaziyo ukuba yeyiphi, mxelele.
kodwa andiyicebisi, kuba ihamba kancinci
Molo, ndikhangela apho ndasifumana khona isicelo, sibizwa ngokuba yi-Element
Ayisebenzi kum, ndine-3GS ene-4.0.1 andazi nokuba iyekile ukusebenza nale FW.
Kulusizi ukuba esi sicelo asihlaziywa kwi-iOS4. Kum yayiluncedo olukhulu.
I-FullForce 1.0-Izicelo-iCydia [yasimahla] -Izicelo ze-iPhone kwi-IPad kwiscreen esigcweleyo
IWinterBoard 0.9.3182-1-Uhlaziyo-iCydia [yasimahla] -Ukuzenzela i-iPhone, iPod Touch kunye ne-iPad ngokwezifiso